नेप्सेमा एकैदिन ६ बैंक वित्तिय संस्थाको १ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैक > नेप्सेमा एकैदिन ६ बैंक वित्तिय संस्थाको १ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत !
काठमाडौ। मंगलबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा एकै दिन एक करोड ९६ लाख ६० हजार ९५२ दशमलव ८१कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । यसदिन ६ वटा कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको हो । बजारमा एक करोड ८४ लाख ४७ हजार ५३६ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ भने १२ लाख १३ हजार ४१६ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ ।
मंगलबार ज्योति विकास बैंकको ७६ लाख ६५ हजार ६६३ कित्ता हकप्रद सेयर, गरिमा विकास बैंकको ८७ लाख ३० हजार ३७८ कित्ता हकप्रद सेयर, प्रभु इन्स्योरेन्सको १९ लाख २५ हजार ७८ दशमलव ८१ कित्ता हकप्रद सेयर, नागबेली लघुवित्त विकास बैंकको एक लाख २६ हजार ४१७ कित्ता हकप्रद सेयर सेयर सूचिकृत भएको छ ।
यसैगरी बोनसतर्फ नागबेली लघुवित्त विकास बैंकको एक लाख ५० हजार कित्ता, महालक्ष्मी विकास बैंकको ९ लाख १३ हजार ४१६ कित्ता र आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ लाख ५० हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ ।
२०७४ असार २० गते १६:०४ मा प्रकाशित
मनसुन सक्रिय भएसँगै देशैभर वर्षा,कृषि कर्ममा फाईदा
गोला थुतेरै अध्यक्ष जित्ने यी हुन् भाग्यशाली मेनुका !
विश्वचर्चित फुटबलर मेस्सीले नेपालमा स्वास्थ्य संस्था बनाउँदै
अधिकृत पदको लिखित नतिजा सार्वजनिक
सेयरमा गीरावट !
वित्तीय साक्षरताको लागि ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रभातफेरी
धादिङ र जनकपुरमा ग्याँस भण्डारण स्थल बनाइंदै